Dibed bax ka hor dhacaya Safaaradda Siiriya ee Stockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dibedbaxayaasha oo hortaagan safaarada Siiriya ee Stockholm. Photo: Henrik Montgomery/Scanpix
Dibed bax ka hor dhacaya Safaaradda Siiriya ee Stockholm
La daabacay tisdag 14 augusti 2012 kl 13.16
Dibed bax ay dhigayaan dad Siiriyaan ah ayaa tan iyo saakay waxuu ka hor socdaa safaaradda Siiriya ee ku taalla degmada Dandeyrd oo ku taalla daafaha magaaladda Stockholm.
Tiro boolis ah ayaa jooga isla goobta uu ka socda dibed baxa iyada oo sidoo kale helikobtar ay leeyihiin booliska ay dul heehaabeyso isla goobtaasi.
Dadkan dhigaya banaanbaxa ayaa ka tirsan mucaaradka dalka Siiriya ee doonaya in ay talada ka tuuraan madaxweynaha dalkaasi Bashaar Assad ayna ka hirgeliyaan dalkaasi nidaamka dimoqraadiyada.
Dadkaani ayaa ku qeylinaya erayo ay ka mid yihiin ''Iswiidhan tallaabo ha qaado'' iyo "Carl Bildt tallaabo qaad".
Toban ruux ayay xireen booliska gelinkii hore ee saakay ka dib markii ay dadkaasi isku dayeen in ay gudaha u galaan dhismaha safaaradda ayna u geysteen wax yeelo isla dhismaha safaaradda.
Dhinaca kale, dadka u dhashay dalka Siiriya ayaa la filayaa in sanadkan ay noqdaan dadka ugu tiro badan ee qaxooti ahaanta u yimaada dalka Iswiidhan iyada oo toddobaadkii hore keliya 227 qof oo siiriyaan ah ay magan gelyo weydiisteen dalka Iswiidhan.
Dalalka Iswiidhan iyo Jarmalka keliya ayaa sharciyo deganaansho oo waqtigooda xadidanyahay waxay siinayaan qaxootiga Siiriya ee ka soo baxsanaya dagaalka ka socda dalkaasi iyada oo wadamada kale ee qaaradda Yurub aysan weli irdahooda u furan qaxootiga Siiriya.
Haweeney Siiriyaan ah oo lagu magacaabo Amal da'deeduna tahay 28-sano kana soo jeeda magaaladda Dimishiq ayaa ugu mahad celisay Iswiidhan soo dhoweynta loo fidiyay iyada iyo qoyskeeda.
- Weligeen kuma fekerin in na lagu qasbi doono in aan ka soo tagno Siiriya laakiin ma jirin wado kale oo inoo furneed, waa in aan badbaadinaa caruurteena, ayay tiri Amal.
Cecilia Wikström, oo ah xubin ka tirsan baarlamanka Yurub kana tirsan xisbiga Folkpartiet,ayaa sheegtay in ay haboon tahay in yurub ay muujiso mas'uuliyad mideysan oo ah qaabilaada qaxootiga Siiriya.
- Waxaa muhiin ah in aan yeelano hal cod ee ma ahan in 27 cod oo kala duwan in aan ku hadalno. Dadka nasiibka u yeesha in ay ka soo baxsadaan rabshada Siiriya, waa in si isku mid ah loogu soo dhoweeyaa Yurub oo ay jawaabteena noqoto mid keliya, ayay tiri Cecilia Wikström.
Sida ay sheegtay hay'adda Q.M u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ugu yaraan 150 000 qof oo siiriyaan ah ayaa u soo baxsaday dalalka Siiriya la deriska ah iyada oo qaarkood ay u soo gudbeen qaaradda Yurub.